Phinda ubhale phansi, ubuyekeze, noma ubuyekeze umbhalo igama lokushintshwa kwegama
Phinda ubhale ngokuzenzakalela umbhalo ogcwele
Phinda ubhale umbhalo ngaphakathi Zulu
Sikholelwa ukuthi ama-robot kufanele abe yilokho okubhalwa phansi. Umbhalo wokubhala ubalulekile ekusetshenzisweni kwenjini yokusesha (SEO), okwenza amakhophi ezincwadi noma amaphepha, ngokuphindaphindiwe kokuqukethwe ngezindlela ezintsha, nokugcina amahora amahora omsebenzi womuntu. Imishini yokubhala kabusha ngokuzenzekelayo emakethe njengamanje ibiza inzuzo, futhi asikholelwa ukuthi kufanele. Ngakho-ke, sinikeza umshini wethu wokubhala kabusha ngezilimi ngezilimi ezingaphezu kwezingu-100 ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu unelungelo lokubhala umbhalo.
Yini Engingayisebenzisa Ngayo?
Ukubhala kabusha izincwadi
Ukubhala kabusha izihloko
Ukubhala kabusha okuthunyelwe kwezokuxhumana
Ukubhala kabusha umsebenzi wesikole
Ukubhala kabusha izinsolo
Ukubhala kabusha amawebhusayithi
Ukubhala kabusha izigaba
Ukubhala kabusha imibhalo
Ukubhala kabusha imisho
Ukubhala kabusha imiyalezo
Ukubhala kabusha amanothi
Ukubhala kabusha indlela yokufaka izihloko
Ukubhala kabusha iziqondiso
Ukubhala kabusha izahluko
Ukubhala kabusha izingcaphuno
Ukubhala kabusha izindaba zezindaba
Ukubhala kabusha amakhasi okuqukethwe
Ukubhala kabusha amakhasi encwadi
Ukubhala kabusha amakhasi wewebhusayithi
Ukubhala kabusha ngezilimi eziningi
Ukubhala kabusha ngokwenza imibono
Ukubhala kabusha amamenyu
Ukubhala kabusha umsebenzi wesikolle
Ukubhala kabusha imibiko
Ukubhala kabusha amaslayidi we-powerpoint
Ukubhala kabusha google docs
Ukubhala kabusha ama-docs emagama
Ukubhala kabusha amafayela
Ukubhala kabusha izethulo
Ukubhala kabusha ama-imeyili
Ukubhala kabusha izikripthi ezihunyushwe
Ukubhala kabusha ukubekezela
Ukubhala kabusha izincwadi zokufunda
Ukubhala kabusha imibiko yebhu
Ukubhala kabusha izincwadi zokufundisa
Yimuphi umbhalo obhala kabusha ngomshini ongakwenza
Amanye amagama ngezansi awahumushi kahle kusuka esiNgisi.
Phinda ubhale umbhalo
ukulungisa kabusha umbhalo
Phinda usebenzise umbhalo
lungisa kabusha amagama
ikhasi lokubhala kabusha
umshini wokubhala ozenzakalelayo
shintsha ngokuzenzakalelayo amagama
Ukusetshenziswa Nokunconywa Kunconyiwe
Isigaba esisodwa ngesikhathi
Kungcono ukuphinda ubhale isigaba esisodwa ngesikhathi bese umshini uzokwazi kangcono ukuhlola lokho okushiwo umbhalo ngokusho kwawo. Iziqu ezincane zilula kakhulu ukubhekana nokuyivumela ukuba ubuyisele imiphumela engcono.
Ngezinye izikhathi kunemishwana ngezilimi ezingatholakali kahle ngokubhala umbhalo noma ubuchwepheshe bokuhumusha okwenze kube nzima ukuphinda ubhale okuqukethwe. Ngokugwema imisho eyingqayizivele, umshini wokubhala kabusha uzokwazi ukubhala kabusha umbhalo wakho.
Gwema umbhalo omude kakhulu
Uma kunombhalo, kunzima kakhulu ukuthi umtloli aphinde abhale umbhalo ngoba kunzima kakhulu ukuthola incazelo yombhalo. Kungcono kakhulu ukusebenzisa amancane amathekisthi.
Qaphela kabili imiphumela yakho
Ababhalisi bokubhala abangekho abaphelele, qinisekisa ukuthi ubuyekeze kabili ukukopisha umbhalo emva kwalokho ukuze uqiniseke ukuthi ubukeka bukeka kahle. Ngokuvamile kuyadingeka ukushintsha igama noma amabili.
Ukuze uthole imiphumela emihle
Sebenzisa wonke amathiphu neseluleko ngenhla!
Isibonelo Isihloko Rewrite
Kusukela ngawo-1960 ukuthuthukiswa okukhulu kwenzelwe, kodwa ngokusobala akuveli ekuphishekeleni i-AI yokulingisa abantu. Kunalokho, njengoba kwenzeka emiphakathini ye-Apollo, le mibono iye yafihlwa ngemuva kwezigcawu, futhi kube yizandla zomsebenzi zabacwaningi ezigxile ezinselele ezithile zobunjiniyela. Nakuba kungabonakali emphakathini jikelele, ucwaningo kanye nokwakhiwa kwezinhlelo ezindaweni ezifana nokubuyiswa kwedokhumenti, ukuhlukaniswa kwamathekisthi, ukutholakala kokukhwabanisa, izinhlelo zokuncoma, ukusesha okuzenzela, ukuhlaziywa kwenethiwekhi yomphakathi, ukuhlela, ukuxilongwa nokuhlolwa kwe-A / B kube yimpumelelo enkulu - Lezi yizinyathelo ezithuthukisiwe ezinkampani ezinamandla njengeGoogle, Netflix, Facebook ne-Amazon.
Inqubekela phambili eningi yenziwe kusukela ngawo-1960, kepha kungenzeka ukuthi ayitholakalanga ngokufunwa kwe-AI yomuntu olingisa. Kunalokho, njengalokhu kwenzeka ku-spacecraft ye-Apollo, le mibono iye yafihlwa ngemuva kwezigcawu futhi yaba umsebenzi wabacwaningi igxile ezinselele ezithile zobunjiniyela. Naphezu kokungaveli kubantu jikelele, ukucwaninga nezinhlelo zokudala ezindaweni ezifana nokubuyiswa kwedokhumenti, ukuhlukaniswa kwamathekisthi, ukutholakala kokukhwabanisa, izinhlelo zokunconywa, ukusesha ngokwezifiso, ukuhlaziywa kwenethiwekhi yokuxhumana, ukuhlela, ukuxilongwa nokuhlolwa kwe-A noma B kube yimpumelelo enkulu . Lezi zintuthuko zenze izinkampani ezifana ne-Google, Netflix, Facebook ne-Amazon.
Ezinye izilimi ezisekelwe
Abalingiswa Bombhalo Abhala kabusha
Sinikeza umshini wethu wokubhalisa kabusha wokuthengisa kabusha ngezilimi ezingaphezu kwezingu-100 ezahlukene. Noma kunjalo, leli khasi lapha kungenzeka libhalwa ngumhumushi. Uma ungathanda ukusisiza ngegrama noma iseluleko, sicela uxhumane nathi ngezansi.
Xhumana nathi kevind@ota.ai
Ukufinyelela kwe-Endpoint ye-API
Njengamanje sinikeza umshini wethu wokubhala kabusha othomathikhi ngezilimi ezingaba ngu-100, futhi unalo uhlu lokulinda lamaphuzu okugcina we-API elimi. Uma ungathanda ukucatshangwa ukuthi usebenzisa i-API, sicela uxhumane nathi ngezansi (mhlawumbe ngesi-english).
Leli khasi lase libhalwe ngesiNgisi futhi lihunyushwe. Uma unezilungiso, sicela uthumele i-imeyili lapha. kevind@ota.ai